ALOGEAR - Quanzhou Omi Dharka Co., Ltd.
Sidee U Shaqaysaa
Yoga ayaa dhigay
leggings & gaab
Gunta gunta Firfircoon
Baaskiil Xidho Gunta hoose
Baaskiil wadashada sare
Tilmaamaha dharka firfircoon ee 2021
Isku darka quruxda badan ee naylonka fudfudud iyo fidsanaanta, spandex-ka sasabashada leh ayaa ka dhigaya dhejiskaas kuwa ugu fiican adduunka. Waxay dareemayaan inay yihiin kuwo jilicsan oo raaxo leh sida suufka loogu talagalay xirashada dharka caadiga ah iyagoo waliba dhidid dhidid si ay uga shaqeeyaan. Luggooyinka nylon-spandex waa habka loo maro.
Nylon Spandex waxaa lagu sifeeyay inay tahay fiber elastomeric ama kaliya fiber ama shey ballaarin kara in ka badan 500% iyadoo aan la jebin. Layaabka cusub ee farsamadan-farsamaysan lagu farsameeyay super-fiber-ka ayaa ah awooda ay ugu soo laaban karto cabirkeedii hore markii aan la adeegsan. Nylon Spandex waa bedel weyn oo caag ah dharka maxaa yeelay waxay leedahay dabacsanaan weyn oo si fudud ugu laaban karta qaabkeedii hore. Dharka laga sameeyay Nylon Spandex ayaa ka raaxo badan, in kastoo, ay adag yihiin. Maqaarka Nylon Spandex waa mid aad u fudud marka loo eego caagga dabiiciga ah ee ka fudud maqaarka.
Nylon Spandex, oo ah naqshad balaaran, ayaa markii hore bilaabaya adeegsiga sida dharka la doorbido ee superheroes sida Superman iyo Batman, laakiin isla markiiba waxaa soo dhoweeyay ciyaartooyda adduunkeena casriga ah. Dabaasha, jimicsiga, iyo shaashadda shaatigga ah waxay xirtaan Nylon Spandex oo saameyn muuqata leh. Xitaa ma ahan ciyaartooy iyo dabbaasha, ciyaartooydeena sidoo kale waxay xirtaan dhar hoosta Nylon Spandex oo garoonka ku yaal.
Xitaa dharka isboortiga, dharka Nylon Spandex wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan ujeeddo kale sidoo kale. Marka laga reebo awooddeeda ay ku soo ceshan karto qaabkeedii hore markii aan la isticmaalin iyo qaabka, Nylon Spandex waa dhar aad u fiican. Waa mid khafiif ah oo jilicsan sidoo kale u adkeysanaya saliidaha jirka ama dhidid. Sidoo kale waa xoqid adkaysi, xoqan, iyo dhar aan xasiloonayn.
Nylon Spandex ayaa timid oo ka baxday moodada sanadihii la soo dhaafay qaabab kala duwan. Tusaale ahaan, joornaalada Nylon Spandex waxay caan ku ahaayeen 1980-yadii. Nylon Spandex waxay ahayd waxyaabaha lagu doorto dharka isboortiga tan iyo markii la ogaaday. Waa kuwan qaar ka mid ah adeegsiga asaasiga ah ee Nylon Spandex.
Nylon Spandex badanaa waxaa loo isticmaalaa dharka Swimsuits. Dharka hoose, Bra braps, sharaabaadyada ayaa sidoo kale doorbiday inay lahaadaan maadada Nylon Spandex. Qalabyada kale ee isboortiga sida gaagaaban wareega, Suudhka Lagdamaaga, Netball, iyo suudhka kubbadda laliska ayaa sidoo kale la doorbidaa inay leeyihiin dharka Nylon Spandex. Waxyaabaha kale ee laga diyaariyey Nylon Spandex waxaa ka mid ah dharka dharka lagu xidho, galoofyada, xafaayadaha, suudhadhka qabashada dhaqdhaqaaqa iyo dacwadaha Zentai, suumanka, Qalliinka qalliinka iyo Rowing unisuits.
Nylon Spandex sidoo kale aad bey caan u tahay sheekooyinka sayniska. Calaamadaha buugga 'Comic Characters' dhammaantood waxay ku labisan yihiin dharka Nylon Spandex. Nylon Spandex waxaa loo maleynayay inay tahay waxyaabaha mustaqbalka, sidaa darteed dhammaan sheekooyinka iyo majaajillada ay ka muuqdaan labbiska astaamahooda dharka Nylon Spandex.
Kala duwanaanta iyo xoogga dharkan ayaa ka dhigan in loo isticmaali karo ujeedooyin kala duwan. Gawaarida jimicsiga waa mid ka mid ah codsiyada ugu caansan ee dharkan maxaa yeelay waxay u oggolaadaan jirka inuu neefsado, muruqyaduna way ballaadhaan oo way is qabsadaan inta lagu jiro jimicsiga. Sababta kale ayaa laga yaabaa inay tahay, waxay kuu oggolaanaysaa inaad ilaaliso muruqyada inta lagu jiro jimicsiga oo aad ku dhejisid aragga.
Markaad dooranayso dharka Nylon Spandex, waxaa jira waxyaabo yar oo aad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso. Marka hore waa ujeedada shaqsi uu u adeegsanayo dharka. Ka soo qaad, haddii aad raadineyso surwaal ordaya, markaa waxaad u baahan tahay inaad go'aan ka gaartid inta udhaxeysa dharka jilicsan iyo dharka fudud. Kuwa skintight-ka ayaa kufiican maalmaha qabow iyo socod gaaban maadaama ay kuguleylinayaan halka noocyada baggiest ugu fiican ay yihiin maalmaha qoraxdu iyo khafiifka tahay.
NO.155, Fanrong Road, Quanzhou, Fujian, Shiinaha